डाटा साइन्स - हुप्राचौर डाटा सेन्टर सञ्चालनको अन्तिम चरणमा
हुप्राचौर डाटा सेन्टर सञ्चालनको अन्तिम चरणमा
काठमाडों । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका महत्वपूर्ण सूचनाको व्यावसायिक विवरण सुरक्षा गर्ने गरी हेटौँडामा निर्माण भएको डाटा सेन्टरको यही वैशाख अन्तिमबाट सञ्चालनमा आउने भएको छ । कोरियन संस्था कोइकाको सहयोगमा निर्माण भएको सेन्टरमा रु ३७ करोड खर्च भएको जनाइएको छ । सेन्टर निर्माणका लागि नेपाल आदर्श निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिइएकामा कम्पनीले १८ महीनामा भवन निर्माण सम्पन्न गरेको हो । हेटौँडा–४ को हुप्राचौरमा १० कठ्ठा क्षेत्रफल ओगटेको सेन्टरको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गर्दै एनसेलले पहिलो सिम अफर प्रस्तुत गरेको छ । यो पहिलो सिमको मूल्य केवल १ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सिममा दिन र रातको डाटा प्याकहरु, प्रत्येक पटकको रिचार्जमा एसएमएस र डाटा बोनस तथा माइ फाइभ समाविष्ट छन् । विद्यार्थीहरुले सिम आफ्नो नजिकैको एनसेल सेन्टरबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सिम प्राप्त गर्न विद्यार्थीहरुले एसइइको प्रवेश कार्ड र अभिभावकको नागरिकताको प्रतिलिपि र पासपोर्ट साइजको फोटो एक थान् लिएर जानु पर्नेछ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आइतबारदेखि हनुमानढोका, पशुपतिनाथ, स्वयम्भू, बौद्ध, बालाजु बाईसधारा उद्यान र शंखपार्कमा फ्री वाईफाई सेवा सुरु गरेको छ । इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी वल्र्ड लिंकको साझेदारीमा यी ६ स्थानमा फ्री वाईफाई सेवा सुरु गरिएको हो । आइतबार एक कार्यक्रमका बीच सेवाको उद्घाटन गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरपालिकाको घोषित नीति अनुसार काठमाडौंको मुख्य ६ स्थानहरुमा फ्रि वाईफाई सेवा संचालनमा ल्याइएको बताए ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । त्रिभुवन विमानस्थलमा सोमबार देखि आन्तरिक टर्मिनलमा फ्री वाइफाइ सेवा सुरु भएको छ । आज देखि संचालनमा आएको वाइफाइ सेवा केही दिन अथवा अर्को सातादेखि अन्तराष्ट्रिय टर्मिनलमा संचालनमा आउने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले बताएका छन् । पर्यटन मन्त्री अधिकारीले अर्को हप्ता देखी अन्तराष्ट्रिय टर्मिनलमा संचालनमा आउने यो सेवाले यात्रुको सुविधामा थप सहयोग मिल्ने बिश्वास लिएको बताए ।	थप पढ्नुहोस्
इन्टरनेट सेवाको १३ प्रतिशत मूल्य वृद्धि फिर्ता
काठमाडौं । आर्थिक बर्षको पहिलो महिना साउन १ गतेदेखि इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत मूल्य वृद्धि गर्ने निर्णय सरकारले फिर्ता लिएको छ बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा गठित मूल्य समायोजन सिफारिस समितिले तत्काल उपभोक्ताले तिर्ने इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि नगर्ने निर्णय गरेको हो ।	थप पढ्नुहोस्
मोबाईल टुटफुट भयो ? नो चिन्ता मेरो सुरक्षाले दिन्छ नयाँ मोबाइल
काठमाडौं । मोबाइल हराउने वा विभिन्न कारणले बिग्रिने समस्याले चिन्तित हुनुहुन्छ ? अब ढक्क हनहोस, चिन्ता लिनु पर्देन, तपाईको मोबाइलको रक्षा अब मेरो सुरक्षाले गर्ने भएको छ । नेपालमै पहिलो पटक सञ्चालनमा आएकोमोबाइल प्रोटेक्शन प्लानले मोबाइलका प्रयोगकर्ताको हैरानीको अन्त्य गर्ने भएको हो । मेरो सुरक्षा प्रालिले स्मार्टफोनको सुरक्षाको लागि “मेरो सुरक्षा स्मार्टफोनको गर्छ रक्षा”नामक योजना सुरु गरेको छ । मेरो सुरक्षाका अनुसार जुनसुकै स्मार्टफोन ड्यामेज भएमा, हराएमा वा चोरी भएमा मोबाइलका प्रयोगकर्ताले प्रोटेक्शन प्लान अन्तरगत नयाँ मोबाइल पाउने छन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । एप्पलको एप्लिसन स्टोरको रुपमा रहेको एप स्टोरका प्रयोगकर्ताको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । एप्पलका अनुसार विश्वका १ सय ५५ देशमा एप डाउनलोड तथा प्रयोग गर्नका लागि एप स्टोरमा प्रयोगकर्ताले बिताउने समयमा वृद्धि हुँदै गएको छ । एप स्टोरले आगामी जुलाई १० मा स्थापनाको दशौँ वर्षगाँठ मनाउन गैरहेको छ । सन् २००८ मा ५ सयवटा एपको साथमा एपस्टोर सुरु भएको थियो । यसले सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषयवस्तुमा, मानिसका क्रियाकलाप, खेल, भेटघाट, घुमफिर लगायतका धेरै चिजमा परिवर्तन ल्याएको प्रयोगकर्ताहरुले बताएक छन् ।	थप पढ्नुहोस्
मौसमको जानकारी दिने बेलुन उड्यो !
अब्दुल्लाह मियाँ काठमाडौं । मौसमी गतिविधि थाहा पाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पहिलोपटक वेदर बेलुनु अर्थात् रेडियो सोन्ड उडाएको छ । त्रिविको जल तथा मौसम केन्द्रीय विभागसंगको सहकार्यमा सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम विभागका महानिर्देशक डा।ऋषीराम शर्मा र त्रिविका रजिस्टार डिल्लीराम उप्रेतीले शुभारम्भ गरेका थिए । बुधबार बिहान ५ बजेर ३७ मिनेटमा त्रिविको ग्राउण्डबाट उडाइएको बेलुन १९ हजार मिटर उचाईसम्म पुगेको थियो। विभागका महानिर्देशक डा।ऋषीराम शर्माका अनुसार उक्त बेलुन ८ बजेर १५ मिनेटमा सुन्दरीजल आसपासमा खसेको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
वल्र्ड कप झक्कास् योजना, इन्टरनेट किन्दा सित्तैमा नेट टिभी
काठमाडौं । विश्वकप फुटबल २०१८ नजिकिएका बेला वल्र्डलिक कम्युनिकेसन्स प्रा.लि.ले इन्टरनेट किन्दा निशुल्क नेट टिभी पाउने “बिस तिस पच्चास वल्र्डकप झक्कास्” नामक प्याकेज योजना ल्याएको छ । यस्तो प्याकेज किन्ने फुटवल प्रेमीले १२ महिनासम्म निशुल्क नेटटिभी पाउन सक्ने भएका छन् । नेटटिभीबाट ग्राहकहरुले फूल एचडी च्यानलबाट वल्र्डकप खेल हेरेर आनन्द लिन सक्ने छन् । वल्र्डलिंकको झक्कास् प्याकेज खरिद गर्दा २०, ३० र ५० एमबिपिएसको द्रुत गतिको अनलिमिटेड इन्टरनेटका साथै ५५ भन्दा बढी एचडी च्यानल र १३५ भन्दा बढी एसडी च्यानल भएको नेटटिभि निशुल्क पाउन सकिन्छ ।	थप पढ्नुहोस्